I-CREEP yayiyifomfayile engabonakaliyo isetyenziswe kakubi kwiKomidi yoNyulo lukaMongameli, inhlangano yokuxhaswa kwezimali ekulawuleni uMongameli Richard Nixon . I-CRP echanekileyo ngokusemthethweni, ikomiti yaqala ukulungiswa ngasekupheleni kowe-1970 kwaye yavula i-ofisi yayo eWashington, DC kwintwasahlobo ka-1971.
Ngaphandle kwendima yayo enobungcipheko kwi- scandal ye-Watergate ka- 1972, i-CRP yafunyanwa ukuba iqeshe imali yokuthengisa imali kunye nemali engekho mthethweni ye-slush kwimisebenzi yayo yokhetho kwakhona egameni likaMongameli uNixon.
Ngethuba lophando lwe-Watergate break-in, kuboniswe ukuba i-CRP yayisebenzise ngokungemthetho ama-500,000 eemali kwiiprojekthi zemikhankaso ukuhlawula iindleko zomthetho zabatshaba abahlanu base-Watergate ngokubuyisela isithembiso sabo sokukhusela uMongameli uNixon, okokuqala ngokuhlala ethule, kwaye ukunikela ubungqina bobuxoki enkundleni - ukuziphatha ngokugqithisileyo - emva kokunyanzelwa kwabo.
Amanye amalungu angundoqo ase CREEP (CRP) afakwe:
UJohn N. Mitchell - UMlawuli weCamphulo
I-Jeb Stuart Magruder - Isekela loMphathi we-Campaign
UMaurice Stans - uSihlalo wezeMali
UKenneth H. Dahlberg - USihlalo weMidiya eMidwest
UFred LaRue - Ulawulo lwezopolitiko
UDonald Segretti - Umsebenzi wezopolitiko
UJames W. McCord - uMququzeleli woKhuseleko
E. Howard Hunt - Umcebisi weCamphu
UG. Gordon Liddy - Ilungu leLungu leNgcaciso kunye nezeMali
Ngaphandle kwezigqeba, izikhulu ze-CRP uG. Gordon Liddy, E. Howard Hunt, uJohn N. Mitchell kunye nabanye abaphathi beNixon bavalelwa ngenxa yokuphulukana kwe-Watergate kunye nemizamo yabo yokuyivala.
I-CRP yafunyaniswa ukuba ibe neenxulumano kwi-White House Plumbers. Ehlelwe ngoJulayi 24, 1971, i-Plumbers yayisigqeba esiphezulu ngokubizwa ngokuba yiCandelo leNgcaciso yeeNdawo eziPhezulu ze-White House ezibhekiswe ekuthintela ukuvuza kweengcaciso eziyingozi kuMongameli Nixon, njengePentagon Papers kwi-press.
Ngaphandle kokuzisa iintloni kwi-ofisi kaMongameli wase-United States , izenzo ezingekho mthethweni ze-CRP zanceda ukuguqulwa kwinqanaba lezombusazwe eliza kuzisa umongameli ongekho mthethweni kwaye afune ukungaqiniseki ngokubanzi ngurhulumente wesigqeba njengenxalenye yokubhikisha ngokuqhubekayo Ukubandakanyeka kwe-US kwimfazwe yaseVietnam .
Umntwana kaMary Mary
Xa kwenzeka i-Watergate imeko, kwakungekho mthetho ofuna iphulo lokudalula amagama abaxhasi ngabanye kwimikhankaso yezopolitiko. Ngenxa yoko, isixa semali kunye nabantu ngabanikela ngemali kwi-CRP kwakuyimfihlelo eqinile. Ukongezelela, iinkampani ziyimfihlo kwaye zinikela ngokungekho mthethweni imali kule phulo. U-Theodore Roosevelt wayedlulele phambili kule nqunqutyana yeenkampani ezinikela ngemali ngo-1907. Unobhala kaMongameli uNixon, uRose Mary Woods, wagcina uluhlu lwabaxhasi kwi-drawer ekhethiweyo. Uluhlu lwayo lwalubizwa ngokugqithisileyo ngokuthi "Baby Mary," ibhekisela kwifilimu eyaziwayo ye-1968 ebizwa ngokuthi "Baby's Rosemary".
Olu luhlu aluzange lutyhilelwe kude kube nguFred Wertheimer, umxhasi wokuxhasa utshintsho lwemali unyanzelekile ukuba avule evulekileyo ngetyala eliphumelelayo.
Namhlanje, uluhlu lwabantwana beRose Mary luyabonakala kwi-National Archives apho kubanjwe nezinye izinto ezihlobene ne-Watergate ezikhishwe ngo-2009.
Iingcingo ezingcolileyo kunye ne-CRP
Kwi-Watergate Scandal, u-Donald Segretti owayengumsebenzi wezopolitiko wayephethe "amaqhinga angcolileyo" ayenziwa yi-CRP. Ezi zenzo zazibandakanya ukungena kwi-ofisi ka- Daniel Ellsberg ye- psychiatrist, uphando lomnyathelisi uDaniel Schorr, kunye nezicwangciso zikaLiddy ukuba abe nomgcini wephephandaba uJack Anderson.
UDaniel Ellsberg wayekho emva kokuvuza kwePentagon Papers epapashwe yiNew York Times. Ngokutsho kukaEgil Krogh kwisiqwenga esiseNew York Times sanyatheliswa ngo-2007, wahlawuliswa kunye nabanye ukuba baqhube umsebenzi oza kutyhila imeko ye-Ellsberg yempilo yengqondo ukuze amhlonele ngokuba amanqaku ngaye kwi-ofisi kaDkt. Lewis Fielding. Ngokutsho kweKrogh, ukuphuka okungafumani nto ngo-Ellsberg kwenziwa ngegama lokhuseleko lwesizwe.
U-Anderson wayekujolise ekubhenkisweni kwakhe kwincwadi ebonisa ukuba i-Nixon yayizithengisa ngasese ePakistan kwimfazwe yazo ngokumelene ne-Indiya ngo-1971. U-Anderson wayesele eva e-Nixon. Isalathiso sokumthobaza saziwa ngokubanzi emva kokuhlaselwa kwe-Watergate. Nangona kunjalo, icebo lokumbulala ngokungazange liqinisekiswe kuze kube yilapho u-Hunt avuma ebhedini lokufa.
NgoJulayi 1974, iNkundla ePhakamileyo yase-United States yalela uMongameli uNixon ukuba aphendule ngamateyipu e-White House aqoshiwe ngasese-i-Watergate Tapes -qukethe iingxoxo zikaNixon ezijongene nokuphuka kwe-Watergate-ekucwangciseni nasekugqibeleni.
Xa u-Nixon wenqaba kuqala ukuguqula iitheyiphu, iNdlu yabaBameli ivotele i- impeach Nixon ngokukhuseleka kobulungisa, ukusetyenziswa kakubi kwamandla, ukukhutshwa kobugebengu kunye nokuphulwa kweMigaqo-siseko.
Ekugqibeleni, ngo-Agasti 5, 1974, uMongameli uNixon wakhulula ii-tapes, ebonisa ubungqina bakhe kwi-Watergate break-in and cover-up. Eyazi ukuba i-impeachment yakhe yayicacile, i-Nixon yashiya ngomhla ka-Agasti 8 kwaye ihamba eofini ngomhla olandelayo.
Ekugqibeleni, ngomhla ka-Agasti 5, uNixon wakhulula ii-tapes, ezanikezela ubungqina obungenakuphikiswa bunyanzeliso bakhe kwizenzo zobugebengu be-Watergate. Xa ebhekene nesicatshulwa esithile malunga neCongress, uNixon wasula ukuhlazeka ngo-Agasti 8, kunye neofisi ekhohlo kulandelayo.
Emva kweentsuku emva kokuba ufungelwe njengomongameli, u- Vice-Mongameli uGerald Ford- ongenalo umnqweno wokuba umongameli ngokwakhe- wanikela u-Nixon ukuba axolelwe ngumongameli ngenxa yezophandle azenzile ebudeni bakhe.
IsiFrentshi esingaqhelekanga -IIzenzi
Ezi Iifoto zeParanormal iya kuba nazo izinto
3 Uphando lweeNkcazo zabafundi ukuphucula umyalelo
Imfazwe Yehlabathi II: USS Randolph (CV-15)